Yadonhedzwa pamberi penzvimbo ye iPhone 7 ine akasiyana bhatani repamba | IPhone nhau
IPhone 7 Yepamberi Pakavhunika: Inoita Senge Yakasiyana Bhatani repamba
Izvozvo tatova nazvo zuva rekuburitsa rinogona kuitika reiyo iPhone 7 hazvireve kuti (zvinofungidzirwa) kuti ruzivo rwakaburitswa haruchazoonekwazve. Mazhinji emifananidzo nemavhidhiyo ataona eiyo iPhone 7 uye ivo vakaita kunge vechokwadi kwatiri, vanobvumirana pachinhu chimwe: havaratidze kumberi kweinotevera apple apple. Ndakagara ndichifunga kuti izvi zvinogona kuve nekuti pane chimwe chinhu chakasiyana icho chavasina kuda kuratidza kusvika parizvino uye, kana chinotevera chifananidzo chiri chechokwadi, kunzwa kwangu kunogona kuve kwakarurama.
Mufananidzo unotevera wakaburitswa mangwanani ano neakaunzi account yeTwitter, iyo account yechipiri (kana main account, achaziva) yeOnLeaks. Ndinofanira kubvuma kuti chifananidzo ichi hachijekese kwandiri zvinotaurwa nemutambi anoremekedzwa, asi murume wechiFrench, uyo ane maziso akanyatsodzidziswa, anoti mufananidzo unoratidza «Inofungidzirwa iPhone 7 pamberi pepaneru ine inoita senge yakapesana bhatani repamba bhatani«. Hongu munoona chimwe chinhu chakasiyana pabhatani rekutanga yepamberi pepaneru yeiyo iPhone 7 (kuruboshwe), asi zvinogona zvakare kuti mutsauko uyu unoonekwa nekuda kwekona iyo iyo pikicha yatora panhare yeinotevera smartphone.
Ko iyo iPhone 7 ichave neya nyowani bhatani repamba?
Yakataurwa #iPhone7 kumberi kwepaneru (kuruboshwe) nebhokisi rinotaridzika kunge rakasiyana ... https://t.co/Qi1dtDy9kL pic.twitter.com/UguHfQeTVA
- Steve Hemmerstoffer (@stagueve) July 23, 2016
Kune runyerekupe rwekuti iyo iPhone 7 ichasvika iine kumanikidza kwekutanga bhataniKureva, 3D Bhatani bhatani iro risingazonyure. Kune rimwe divi, Deutsche Bank yakaunza chirevo umo yakavimbisa kuti bhatani rekutanga reinotevera Apple smartphone raizove rakasiyana uye raizoteedzera mabhatani eTrippad Force Kubata kweMacBook. Kune runyerekupe rwakawanda runotaura nezve rakachinjika rekutanga bhatani uye / kana bhatani rekutanga, asi kwemakore mazhinji kwave nekutaura nezve kubviswa kwebhatani bhatani uye ini handizive rako, asi yangu iPhone ichine rakakurumbira bhatani.
Ukatarisa paburi mu pamberi pekameraKunyangwe iyo iPhone 6s Plus (kurudyi) ichitaridzika kunge isina kujeka, zvinoita kunge iine chiyero chakaenzana, izvo zvaizoreva kuti iyo 4.7-inch modhi ingave yakakura. Izvi zvinoita kuti ndifunge kuti kuchave nekukwakuka kutsva muhunhu mukamberi kamera yeiyo iPhone 7, asi zvinogona zvakare kuve chishuwo changu kuti uyu ndiye arikutamba tamba pandiri.
Semazuva ese, isu tinofanirwa kuramba tichikahadzika nemufananidzo uyu neruzivo, asi isu tinofanirwa kuziva kuti chero shanduko mubhatani rekutanga inotikonzera kunzwa kwakanaka. Ko iyo iPhone 7 ichave neyakaomesesa-inonzwa bhatani repamba? Ngatitarisirei kudaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » IPhone 7 Yepamberi Pakavhunika: Inoita Senge Yakasiyana Bhatani repamba
Uye chii chine chekuita neakakura bhatani repamba kugadzirisa kamera yekumberi?
Mhoro, Gfhg. Iyo yekumberi kamera iri pamberi pepaneru, handiti? 😉
Maitiro ekuwana ruzivo kukwirisa muPokémon Go